Farmaajo oo aargoosi ku bilaabay saraakiisha iyo ciidankii ka gadooday waqti kordhintiisa - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Farmaajo oo aargoosi ku bilaabay saraakiisha iyo ciidankii ka gadooday waqti kordhintiisa
Farmaajo oo aargoosi ku bilaabay saraakiisha iyo ciidankii ka gadooday waqti kordhintiisa
Farmaajo oo ay ka go’an tahay in uu ciqaab mariyo Saraakiishii hogaaminaysay ciidankii gadooday ayaa waxa uu bilaabay in uu ka aargoosto ragii ka danbeeyay gadoodka ciiidanka. Sida MOL ay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Ciidanka Xooga dalka, Janaraal Bixi oo ay ehel yihiin Madaxweyne Farmaajo oo isticmaalayo Janaraal Odowaa ayaan bilaabay in taabagalinta qorshaha Farmaajo uga aargoosanayo cidanka.
Iyada oo uu Farmaajo amray in aan mushaar la siinin ciidanka gadooday, gaar ahaan ciidanka ka tirsan laba guuto ee ka soo baxay degaanka Shabeellada Dhexe ayaa hadana waxa shalay bilaawday barnaamij lagu sheegay xaqiijinta tirakoobka ciidanka, taas oo micnaheedu tahay in dhamaan ciidanka Xooga Dalka ay iska xaadiriyaan xaruumahooha si loo tiro koobo.
Waxaa sidoo kale loo sheegay ciidanka cida aan isxaadirin in ayan wax xuquuq ah ku yeelan doonin ciidanka.Talaabada uu qaaday Farmaajo ayaa muujinayso in uu wali gacanta ku hayo ciidanka iyo hogaankiisa.
Waxan shaki ku jirin in Farmaajo qorsheynayo in uu ka aargoosto cid kastaa ee ka hortamid waqti kordhintiisa. Waxaa nasiib xumo ah in siyaasiyiintii ay dagaalka kuwada jireen ay dhnakooda bilaabeen in heshiis la gaalan dowlada Farmaajo ayaga oo meel cidla ah uga dhaqaaqay wiilishii noloshooda iyo darajadooda u huray in dalka laga qabto Kaligii talis cusub.
Ilamaa uu Farmaajo ku jiro Villa Soomaaliya, gadaalna uu ka hagayo Ra’iisal Wasaare Rooble, waxaan shaki jirin in markale uu fashilin doono howlaha doorashooyinka. Waxaan shaki ku jirin hadii ciidanka ku sugan Muqdisho lagu celiyo xarumahooda in Farmaajo ku guuleysan doono in uu soo xiro madaxda mucaaradka ama ku guulayso in uu qaariyo. Sida kaliya ee ciidankaas lagu celin kara waa in Farmaajo iscasilaa?.